Maxaa ka socda Dhuusamareeb? | Keydmedia
Maxaa ka socda Dhuusamareeb?
Magaaladda waxay martigelinaysaa shir ay leeyihiin Madaxda Maamul Goboleedyada, kaasoo la filayo inuu maanta furmo, inkastoo madaxda qaar wali tagin, haddana diyaar-garowga wuu socdaa.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Jawi cusub ayay maanta ku jirtaa Dhuusamareeb, iyadoo magaaladda u diyaargarowday marti-gelinta Shirka Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyada, oo qaarkood shalay iyo maanta gaarey.
Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa shirkan ku tilmaamay mid muhiim u ah xal ka gaarista khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Dawladda Federaalka iyo Maamullada, kaasoo ku qotoma arrimha doorashadda, qeybsiga kheyraadka iyo dhameystirka Dastuurka.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maanta ka degay Dhuusamareeb, waxaana uga soo horeeyay wafdiga HirShabeelle oo xalay seexday magaaladda. Wararka ayaa sheegaya in hawada ay kusoo jiraan Madaxda Jubaland iyo Puntland.
Lafta-Gareen oo ay wehliyaan Mas'uuliyiin maamulkiisa katirsan, ayaa diyaarad gaar ah ku tagey Dhuusamareeb, iyadoo aan la socon Ciidan uu kala yimid magaaladda Baydhabo, waxaana loo galbiyay soo dhaweyn kadib halka loo diyaariyay madaxda martida ah.
Xaaladda amniga magaaladda ayaa ah mid isbedel ka muuqdo, kadib markii bandow lagu soo rogay, waxaana Puntland iyo Jubaland madaxdooda la tageey Ciidan u gaar ah, oo ilaaliya maadaama ay shaki ka qabaan in dhibaato ay kala kulmaan dawladda Federaalka, oo xiriirkooda uusan wanaagsanayn.
Ciidamada maamulka Galmudug ayaa lagu wareejiyay mas'uuliyadda amniga, kadib markii shalay magaaladda laga saarey Booliska Haramcad ee DF, kuwaasoo laga shakiyay inay fowdo abuuraan, si shirka loo carqladeeyo.
Waxaa la filayaa in go'aanno laga soo saaro shirka, kuwaasoo madaxda la hor-tagi doono Farmaajo oo wararku sheegayaan inuu dalbaday la kulanka Muqdisho ka dhaca, oo arrimaha taagan heshiis looga gaarayo.